कान्स फिल्म फेस्टिवलको रेड कार्पेटमा वाक गर्ने पहिलो नेपाली कलाकार सुरक्षा पन्त ! - Nepal Bahas Nepal Bahas
कान्स फिल्म फेस्टिवलको रेड कार्पेटमा वाक गर्ने पहिलो नेपाली कलाकार सुरक्षा पन्त !
प्रकाशित मिति : ५ जेष्ठ २०७९, बिहीबार १६:२५
५ जेठ, काठमाडौं । अभिनेत्री सुरक्षा पन्त कान्स फिल्म फेस्टिवलमा सहभागी भएकी छिन् । पन्तले नेपालबाटै कान्स रेड कार्पेटमा वाक गर्ने पहिलो कलाकार बनेकी छिन् । नेपालका केही भागमा छायांकन गरिएको फ्रेन्च फिल्म ‘द एट माउन्टेन्स’ को प्रिमियरमा सहभागी हुन् उनी फ्रान्स पुगेकी हुन् ।
नेपाली चलचित्र बिशेष प्रथमिकता दिनु पर्नेमा जोड
कर्णाली चलचित्र कार्यशाला २०७९ आयोजना गरिने